Jonga ulungelelwaniso lwe-UTM kwiiMephu zikaGoogle kunye nokuJonga isitalato-Geofumed
Ikhaya/Google umhlaba / imephu/Bona i-UTM idibanisa kwi-Google Maps kunye ne-Street View
Bona i-UTM idibanisa kwi-Google Maps kunye ne-Street View
[advanced_iframe src=”https://www.geofumadas.com/coordinates/” wide=”100%” height=”600″]
Inyathelo 1. Khuphela itemplate yokondla idatha. Nangona inqaku lijolise kulungelelwaniso lwe-UTM, usetyenziso luneethemplethi zobude nobude ezinamanani okugqibela, kunye namanqanaba, imizuzu kunye nemizuzwana.
Kwimeko yokudityaniswa kwe-latlong, kuyasebenza ukuba la manani awodluli kwii-90 degrees okanye ukuba ubude abudluli kwi-180.
Ukutsala i icon kwibalazwe unokuba neemboniso zokubukwa kwesitalato okanye ukubukwa kwe-360 elayishwe ngabasebenzisi.
Inyathelo 4. Fumana ulungelelwaniso lwemephu. Amanqaku angongezwa kwitafile engenanto okanye enye efakwe kwi-Excel; uququzelelo luya kuboniswa ngokusekwe kwitemplate, ukubala ngokuzenzekelayo ikholamu yelebheli kunye nokudibanisa iinkcukacha ezifunyenwe kwimephu.
Khuphela imephu yeKml okanye itafile ebalaseleyo usebenzisa inkonzo ye-gTools.
Ufaka ikhowudi yokukhuphela kwaye unefayile onokuyibona kuGoogle Earth okanye nayiphi na inkqubo ye-GIS; Isicelo sibonisa apho ungayifumana khona ikhowudi yokukhuphela onokuyikhuphela ukuya kuthi ga kumaxesha angama-400, ngaphandle komda wokuba zingaphi ii-vertices ezinokubakho kukhuphelo ngalunye usebenzisa i-GTools API. Imephu ibonisa ulungelelwaniso olusuka kwiGooogle Earth, kunye neemodeli ezinamacala amathathu ezenziweyo.
Ukongeza kwi-kml unokukhuphela kwakhona ukugqwesa kwifomathi kwi-UTM, ubude / ubude obude kwi-decimals, izidanga / imizuzu / imizuzwana kunye ne-dxf ukuyivula nge-AutoCAD okanye iMicrostation.
Kwividiyo elandelayo ungabona ukuba idatha kunye nezinye izinto zesicelo zikhutshelwa njani.
Apha ungabona le nkonzo kwiphepha elipheleleyo.
Umhlaba ka-Google KML Office for ebulalayo
Juan Toro uthi:
Molo, molo, kusasa usuka eSpain.
Isicelo esinomdla, ukuba nedatha eqikelelweyo.
Ukuba idatha echanekileyo okanye ulungelelwaniso luyafuneka, kucetyiswa ukuba kusetyenziswe izixhobo zokuhlola ezisetyenziswa ngabasebenzi abaqeqeshiweyo.
Emva koko kunokwenzeka ukuba umfanekiso uphelelwe lixesha kwaye idatha efunwayo ayisekho okanye isusiwe. Kuya kufuneka ubone umhla apho uGoogle "wadlula khona".
Indlela kunye nendawo yokuseta kwifayile ye-Excel indawo ye-35T yaseRomania? Kuba mna andisebenzi. Ukuba ndibeka 35 kuphela ulungelelwaniso lwam nera Central Africa?
Iimephu zeGoogle zisetyenziswe kwimisebenzi yobugcisa